Guddigii loo saaray Kiiska Qalbi Dhagax oo guddoomiye doortay - Qotoqoto
Guddigii loo saaray Kiiska Qalbi Dhagax oo guddoomiye doortay
Guddigii dhawaan guddoonka baarlamaanka Soomaaliya uu u saaray baarista Kiiska Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax iyo go’aankii xukuumada ayaa doortay guddoomiye iyo xogheyn.
Guddiga ayaa guddoomiye u doortay xildhibaan Cali Xoosho, guddoomiye ku xigeenna C/risaaq Cumar Maxamed halka xildhibaan Hani Maxamed Aadan loo doortay xogheyn.
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo kulan la qaatay guddiga ayaa kula dardaarmay in ay dardar geliyaan hosha u taalla islamarkaana laga doonayo in howsha loo xilsaaray ay noqoto mid miro dhashay.
Xubnaha ku jira guddiga ayaa balan qaaday dhinacooda in ay howsha loo xil saaray ay si wanaagsan u soo qiimeyn doonaan islamarkaana warbixin lagu qanco ay kusoo celin doonaan Golaha Shacabka Soomaaliyeed.
Doodda ku saabsan dhiibistii Qalbi Dhagax ayaa xiisad ka dhax abuurtay hay’addaha dowladda, waxaana siweyn loogu dhaliilay xukuumad Soomaaliya go’aanka ay ka qaadatay Kiiska Qalbi Dhagax iyo Ururka ONLF.
Previous PostPrevious Wabiga Shabelle oo Fatahaad ka sameeyay Gobolka Shabellaha Dhexe
Next PostNext Xildhibaanno ka tirsan Golaha Shacabka oo Mooshin ka wada Imaaraadka Carabta